Gudoomiye Salaad oo dadka Galkacayo ugu baaqay in la hubiyo nadaafada xiligan roobabka (Dhegeysi) – Radio Daljir
Gudoomiye Salaad oo dadka Galkacayo ugu baaqay in la hubiyo nadaafada xiligan roobabka (Dhegeysi)
Oktoobar 5, 2013 5:33 b 0
Galkacayo, October 5, 2013 – Duqa degmada Galkacayo Axmed Cali oo Shira jaraa?id maanta ku qabtay xaruunta radio Daljir ee magaalada Galkacayo ayaa aad uga hadlay nadaafada magaalada xaruunta u ah gobolka Mudug, xili roobabkii xiliga dayrta ay bilowdeen.
Axmed Cali waxaa uu sheegay in degmada Galkacayo ay haatan roobab ka de?een isla markaasna ay xaalado naadaafad xumo ka dhalan karaan, waxaa uu qeybaha bulshada ee reer Galkacayo ugubaaqay in talaabo qaadaan.
? Qofba itaalkiisa ayaan dadkayaga ku wacyi gelinaynaa, waxaan leenahay waxaa idiku waajibay horumarinta nadaafada degmada.? ayuu yiri duqa Galkacayo Salaad.
Docda kale duqa Galkacayo oo ka hadlayey isla howlaha nadaafada iyo horumarinta degmada ayaa sheegay in guul laga gaaray in la dhiso jidad waa weyn oo nadaafad wanaagsan leh, waxaana qeybo ka mid ah jidadkaas dhisay maamulkii hore.
Axmed Cali salad waxaa uu xusay qaar ka mid ah jidadka waxaana uu yiri ?Jidad waa wayn ayaa dhisnay, wadooyinku waxay baabi?iyeen meelihii biyo fariisan jireen iyo qashinkii wadooyinka oo khatar badan ka dhalan kartay.?
DHEGEYSO: Duqa Galkacayo Axmed Cali Salaad oo dadka magaalada ugu baaqay in nadaafada la hubiyo.
Ciidamada badda Puntland oo u dabaaldagay sanadguuradoodii sadexaad(Sawiro)
RW Saacid ?Tacsi ayaan u dirayaa qowsaska muhaajiriinta dhintay dhalintu ha joojiyeen tahriibka?